I-Järvenrantahuvila Viitasaarella - I-Airbnb
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguAnna-Liisa
I-91% yeendwendwe zakutshanje inike uAnna-Liisa iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Kumacala amathathu avula i-Keitele, kukho i-villa entle, evulekileyo kwi-peninsula, ekufutshane nonxweme. Le ndlu inamagumbi okuhlala ekhitshini, amagumbi okulala ayi-2, iloft, i-sauna. Indlu esemaphandleni engaselwandle inegumbi eliyi-1 nesauna. Ibhafu entsha ekwindla ka-2016. Uninzi luyafumaneka ukuba imozulu iyavuma, imali eyongezelelweyo yeenkonzo 100 € ngeveki.
Izixhobo: umbane, i-apk, ifriji, isitovu, ioveni, i-toaster, amanzi aphuma kwibhotile, indawo yokubasa umlilo.
Qaphela! I-villa inezixhobo zetafile ezifikelela kubantu abayi-20, ngoko iintsuku ezincinci zokuzalwa njl zinokwenzeka.
I-Vienola ikwindawo entle kakhulu yendalo: kwintloko ye-peninsula, emva kwehlathi lelaphu, amaxethuka agugu avulekileyo ngaselunxwemeni. Le ndawo yaziwa ngabahlali abadala njenge-Midsummer Rock. Le ndlu yagqitywa ngo-1982 kwaye iye yalungiswa ngo-2014 ukuya ku-15. Indlu enendawo yokuphola yagqitywa ngo-2011. Le ndlu inamagumbi okulala amabini ahlukeneyo, iibhedi ezimbini kwicala eliphakamileyo le-loft kunye neebhedi zikadadewabo kwicala elincinci. Indlu esemaphandleni eselunxwemeni inceda abantu ababini ehlotyeni.
Elona nani likhulu leendawo zokuhlala (izinto EZIFIHLAKELEYO) ngu-12 ehlotyeni, mhlawumbi ezisibhozo ebusika. INKCAZELO YEENDWENDWE EZILALA EBUSUKU KUPHELA: Iindwendwe ziza namashiti azo!
Iindaba ezimnandi kwabo bathanda uxolo nobumfihlo: abamelwane abasondeleyo kule ndlu isemaphandleni ekufutshane.
Indlu esemaphandleni ipholile, inendawo evulekileyo ngaphakathi, yongeza indawo ukuphakama kwegumbi kwigumbi lokuhlala ekhitshini. Ikhitshi linayo yonke into oyifunayo. Yiza nokutya kunye nawe! Kukho igesi eyojiweyo kwintente.
Indlela yokuhamba eyenziwe ngamaplanga idibanisa iindawo zangaphandle zezakhiwo ezimbini zibe nye. Ngoko unxweme olujikeleze indlu esemaphandleni lukwindlela ezintathu. Uya kuba nokufikelela kwi-pier kunye nesikhephe.
Ngaphantsi kweekhilomitha eziyi- kukho isikolo sokukhwela eSiipola: (URL IFIHLIWE)
4.75 · Izimvo eziyi-65
Apha ungonwabela ukuqubha, i-sauna, ukuloba kunye noxolo lwendalo. NgoJulayi, ungakhetha ii-blueberries ezininzi kangangoko ufuna. Ekwindla uza kufumana amakhowa amahle kunye nokuncitshiswa kwezitepsi zendlu esemaphandleni.
Ukukhwela ihashe ngaphantsi kweekhilomitha eziyi- (i-URL IFIHLIWE)
Umbuki zindwendwe ngu- Anna-Liisa
Olen keski-suomalainen yrittäjä, äiti ja seitsemän lapsen isoäiti. Vapaa-aikani vietän mieluiten perheeni kanssa. Matkustan paljon sekä työn puolesta että vapaa-aikanani, kesäisin…
Sihlala esixekweni, ungasifowunela ngefowuni okanye nge-imeyile ukuba kuyimfuneko.